Waa Maxay Caabuqa Ku Dhaco Qummanka (Tonsilitis)? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Lama Huraan Waa Cawska Jiilaal |Tukesomalism.com
Afrikaan.so, August 13, 2015
Miski Cabdinuur Salal — August 15, 2019
Qummanka waa qanjiro ku yaallo dhinacyada dhuunta, waxa ayna xoojiyaan unugayada difaaca jirka, waxa ayna ka hortagaan infeshanka ku dhaco sanbabada iyo caloosha.
Mararka qaar qummanka waxaa ku imaado caabuq, waxaa aana sababo fayrus ama bakteeriyo ilma aragta ah, wallow ay sababta ugu badan ay tahay bakteeriyo, Bakteeriyada waxa ay ka dhalataa wax-yaabaha qabowga badan ee uu qofka cabo. Waligaa ma aragtay qof uu ku dhacay caabuqa qummanka?
Adiguse makugu dhacay caabaqa qummanka?
Mararka qaar qummanka waxaa ku imaado caabuq, waxaa aana sababo fayrus ama bakteeriyo ilma aragta ah, wallow ay sababta ugu badan ay tahay bakteeriyo, Bakteeriyada waxa ay ka dhalataa wax-yaabaha qabowga badan ee uu qofka cabo.
Waligaa ma aragtay qof uu ku dhacay caabuqa qummanka?
Ma is weeydisay caabuqa qummanka dhibaatada ka dhalan karto?
Haddaba Kaalay Aan Isla Aragnee Calaamadaha Lagu Garto Caabuqa Qummanka.
Calool xanuun gaar ahaan caruurta yar yar.
Qofka oo ay liqidda ku adkaato.
Qumanka oo gaduuto.
Qofka oo ay ku adkaato dhaqdhaqaaqa luqunta.
Mararka qaar waxa ay keentaa codka ruuxa oo xabeeb yeesho.
Qanjirada qummanka oo soo weeynaado.
Qofka oo lagu arko Af ur
Cawaaqibaha Caafimaad Daro oo Ka Dhasha Caabuqa Qummanka waxaa kamid ah:
Caabuqa ku imaaado wadanahaaga.
Qofka oo neefisiga ku adkaado.
Caabuqa ku imaado dhagahaada .
Qofka oo huradada ku yaraato.
Dheecaanno in ay ku aruuraan agagaarka qanjirada qumanka.
Sidee Loo Daaweeyaa Caabuqa Qummanka Ku Imaado?
Daaweeynta caabuqa qummanka waxa ay ku xirantahay waxa sababay, sida haddii ay bakteeriyo sababtay waxa la siiyaa qofka daawooyin bakteeriyo-dilayaal ah.
Daaweynta waxaa kaloo kamid ah ruuxa in uu qaato nasiino.
Ruuxa in uu iska illaaliyo cabitaanka biyaha qabowga ah, sidoo kale inuu badsado biyaha diiran..
Ilmaha in aad ku dhiirigaliso in ay seexdaan waqtiga aad ogaato in uu ku imaaday quman xanuun.
Cunugga in aad siiso biyo diiran oo cusbo leh si uu ugu luqluqdo,taasi waxa ayna ka qeeyb qaadanaysaa yaraynayta caabuqa qummanka.
ka fogee gurigaada qiiq walbo oo dhuunta ku kicin karo qufac.
Tags: Waa Maxay Caabuqa Ku Dhaco Qummanka (Tonsilitis)?.
Next post Xawaaraha
Previous post Waxyaabaha Kaa Caawin Kara in Aad ka Midho-dhalisid Guushaada